एनआरएन अमेरिकाज क्षेत्रिय बैठकबाट आगामी बिज्ञ सम्मेलन क्यानडामा गर्ने निर्णय भएको छ । क्षेत्रिय सम्योजक राजन त्रिपाठीको संयोजकत्वमा सम्पन्न बैठकमा उक्त निर्णय सर्बसहमतीबाट भएको हो । बैठकमा आइसिसि उपाध्यक्ष रबिना थापा, सचिब गौरिराज जोशी, क्षेत्रिय उप-संयोजक राम सी पोख्रेल्, क्षेत्रिय महिला संयोजक उमा कार्की थापा, क्षेत्रिय युवा संयोजक बिमला सापकोटा, एनसिसि क्यानाडाका अध्यक्ष चिरन्जिबी घिमिरे, […]
अमेरिकास्थित नेपाली समुदायमा महत्वपूर्ण सम-सामयिक विषयहरूमा विभिन्न स्रोत व्यक्तिहरू मार्फत जानकारी दिलाउने हेतुले गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद क्यालिफोर्निया च्याप्टरले सान फ्रान्सिस्को बे एरियामा डिसेम्बर २८ र लस एन्जल्स क्षेत्रमा डिसेम्बर २९, २०१९ को दिन “जानकारीमूलक छलफल” कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको थियो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली संघको अभियान, सूचना र प्रबिधि, […]
एनआरएनए अमेरिकाका दुई पटक अध्यक्ष भएका डा केशव पौडेलले एनआरएनए संस्थागत दिशामा अघि बढ्न नसकेको भन्दै खेद ब्यक्त गरेका छन् । गत विश्व सम्मेलनमा उपाध्यक्ष पदमा उठेर पराजित भएका पौडेलले आफ्नो फेसबुक मार्फत यस्तो बिचार सार्बजनिक गरेका हुन् । विश्व सम्मेलनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको महत्वपूर्ण बैठक यहि सनिबार र आईतबार पोखरामा बस्दैछ । बैठक कै पुर्वसन्ध्यामा […]
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बैठक यहि जनवरी १८ र १९ मा पोखरामा बस्ने भएको छ । यो बैठक मार्फत ९ औं विश्व सम्मेलनमा निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले यसअघि गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने महासचिव डा. हेमराज शर्माले संचार मध्यमलाई बताएका छन् । देश संघीय संरचनामा गइरहेको अवस्थामा संघका गतिविधिलाई प्रदेशहरुसम्म पु-याउन पहिलो पटक संघको […]
एनआरएनए अमेरिकाका आईडी कार्ड समितिका संयोजक गोपेन्द्र भट्टराईले आईसिसिको स्पष्ट निर्देशन नभएका कारण आईडी कार्ड प्रकाशन र वितरण गर्न नसकिएको बताएका छन् । एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष सुनिल साहले धेरै चासोका साथ र सहयोग गरिरहनु भएको संयोजक भट्टराईले बताएका छन् । एनआरएनए अमेरिका आईसिसिको निर्णय आउने बित्तिकै आईडी कार्ड वितरण गर्ने पनि भट्टराईले बताएका छन् । […]
गैर आवासीय नेपाली संघको बृहत भेला मेरिल्याण्डमा भब्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । “गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको मेरिल्याण्ड भेला निर्दिष्ट उद्देश्य अनुरुप पूर्ण रुपमा सफल भयो ।” भेलाका संयोजक तथा गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका क्षेत्रिय उपाध्यक्ष कृष्णजीवि पन्तले नेप्लिज डायस्पोरासंग भने। अमेरिकाको एनआरएन अब एक भयो भन्दै उनले भने, “अब एनआरएनका साथीहरुले […]
राजन त्रिपाठी, एनआरएनए अमेरिकाज क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक हुन। विश्व सम्मेलनबाट निर्वाचित भएर आएपछि उनले काम पनि शुरु गरिसकेका छन् । त्रिपाठीसंग नेप्लिज डायस्पोराका प्रधान सम्पादक सतिश चापागाईंले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ । राजन जी कार्यकालको शुरुवात मै मिलेर जाउँ भन्ने खालको बिज्ञप्ति जारी गर्नु भो नि, किन ? विजयी भएपछी आफ्ना मतदाता र सिंगो अमेरिकाज […]
एनआरएनए बिजेताहरुलाई मेरिल्याण्ड स्टेट डेलिगेट ह्यारी भण्डारीले बधाई र शुभकामना दिएका छन । भण्डारीले फेसबुक मार्फत दिएको बधाई र शुभकामना यस्तो छ । बधाई छ! एनआरएनएको अधिवेशनले सफलतापूर्वक नयाँ अफिसरहरू छनौट गरेको कुरा सुन्न पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। पक्कै पनि, तपाईंको सबै समय र प्रयास, भावना, ऊर्जा, परिवार, मित्रता, स्रोत, प्रतिभा र समय स्वयम्सेवा गर्न […]